Musharraxiinta u tartamaya madaxweynimada Somaliland oo cod isku mid ah ku sheegay in Puntland ay duulaan ku tahay doorashada Somaliland dagaalna abaabulayso. – Radio Daljir
Musharraxiinta u tartamaya madaxweynimada Somaliland oo cod isku mid ah ku sheegay in Puntland ay duulaan ku tahay doorashada Somaliland dagaalna abaabulayso.
Noofember 11, 2017 6:32 g 0
Musharraxiinta u tartamaya jagada madaxweynimada Somaliland oo kala hoggaamiya saddexda xisbi siyaasadeed ayaa maanta kulan a yeeshay guddiga doorashooyinka Somaliland kadib markii uu dhammaaday olalihii doorashada iyo isku soo baxyadii taageerayaasha oo ku ekaa shalay oo Jimce ahayd.
Kulankaasi ayaa looga wada-hadalay jihada cusub ee doorashada jaangooyadooda qoorshe ee guddiga doorashada Somaliland, iyadoo halkaasi ay ka sheegeen guddigu hannaanka ay dejiyeen dhawrka maalmood ee soo socda, kana horreeya ku dhawaaqid natiijada, taasoo ay ku jirto in la hakinayo baraha internet ee bulshada ku wada xiriirto marka codayntu dhammaato, ayna xirnaan doonto inta natiijada lagu dhawaaqayo.
Dhinaca kale musharraxiinta u tartamaysa jagada madaxweynaha Somaliland oo ka kala socda xisbiga talada iyo labada xisbi mucaarad oo kala ah Muuse Biixi Cabdi oo Kulmiye ah, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro oo Waddani ah iyo Faysal Cali Waraabe oo UCID ah ayaa hadal ay sida wada jir ah warbaahinta u siiyeen eedeeyey Puntland, iyagoo sheegay in ay waddo waa Puntland ne qorshe lagu caqabadaynayo doorashada Somaliland iyo duullaan ciidan sida ay sheegeen.
dhegayso Wariye Cabdifatax Cumar Geedi oo Warbiixn kadiyaariyay
Shir u dhaxeeya Wasaaradaha Maamul gobaleedyada & DFS oo Muqdisho ka furmay (dhegayso)